Ny OnePlus 5 no ho OnePlus manaraka hitsena ny tsena, hanana efijery miolakolaka sy vahaolana 23 mpx | Vaovao momba ny gadget
Ny OnePlus 5 no ho OnePlus manaraka hitsena ny tsena, hanana efijery miolikolika sy vahaolana 23 mpx izy
Ny 5? Ary ny 4? Inona no mitranga any atsinanana amin'ireo 4? Nandritra ny fotoana fohy izao, mpanamboatra sasany dia misafidy ny mandingana ny laharana efatra amin'ny fanisan'izy ireo fandefasana kinova vitaminina an'ny maodely teo aloha. Ny ohatra farany hitantsika tamin'ny OnePlus 3T, natomboka volana vitsivitsy taorian'ny nanombohana ny OnePlus 3. Ny fanalavirana ny isa 4 amin'ny kolontsaina sinoa dia misy ifandraisany amin'ny fanononana azy, satria izy io dia tena mitovy amin'ny teny hoe fahafatesana, ka any atsinanana dia raisina ho isa tsy vintana toa ny 13 mety ho amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao. Mba hialana amin'ity finoanoam-poana ity dia efa nanambara ny mpanamboatra OnePlus izay ho mpandimby ny OnePlus 3T, izy io dia i OnePlus 5.
Ny zava-baovao lehibe tondroin'ny tsaho rehetra dia ny hiondrika eo amin'ny sisiny, toy ny fanaon'ny ankamaroan'ny mpanamboatra azy, afa-tsy ny LG miaraka amin'ny maodely farany natolotra ny tsena, ny LG G6. Raha ny filazan'ny tovolahy avy amin'ny PhoneArena, Ny taranaka fahadimy an'ny OnePlus dia afaka manome antsika endrika mitovy amin'ny Galaxy S7 Edge, fa tsy toy izany, ny fitaovana ampiasaina dia ho seramika, toy ny ao amin'ny Xiaomi Mi Mix, iray amin'ireo terminal izay nahasarika ny sain'ny olona tato anatin'ny volana faramparan'ny taona noho ny famafana ny rindrin'ny fitaovana.
Mikasika ny atiny iray ihany dia afaka misafidy ny mpanamboatra manitatra ny famahana ny fakan-tsary, na anoloana na any aoriana, hatramin'ny 23 mpx ao aoriana ary amin'ny 15 mpx eo aloha. Toa te hiverina hiverina amin'ny ady i OnePlus raha hijery hoe iza no manampy megapixel bebe kokoa amin'ny fakantsary, ady izay nafoin'ireo mpanamboatra lehibe indrindra mba hanomezana kalitao avo kokoa amin'ny vahaolana ambany kokoa amin'ny 12 mpx fotsiny. Satria mbola tsy voalahatra ny fandefasana azy ary ny exclusivity Samsung dia nandalo tamin'ny Snapdragon 835, ny OnePlus 5 dia ho tantanana miaraka amin'ity processeur ity ary hatramin'ny 8 GB RAM.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Ny OnePlus 5 no ho OnePlus manaraka hitsena ny tsena, hanana efijery miolikolika sy vahaolana 23 mpx izy
Azonao atao ny mameno tanteraka ny findainao ao anatin'ny 20 minitra fotsiny noho ny Meizu Super mCharge
Yoga 520 sy 720, ireo fiovana vaovao roa natolotr'i Lenovo